आज बुधबार सुनको मूल्य वृद्धि हुँदा चाँदी भने घट्यो ! प्रति तोला कतिमा हुँदैछ काराेबार…… – SUDUR MEDIA
March 17, 2021 March 17, 2021 AdminLeaveaComment on आज बुधबार सुनको मूल्य वृद्धि हुँदा चाँदी भने घट्यो ! प्रति तोला कतिमा हुँदैछ काराेबार……
हिजो र अस्ति लगातार दुई दिन स्थिर रहेको सुनको भाउ वृद्धि भएको छ । फागुन ४ गते बुधबार सुन तोलामा ३०० रुपैयाँले बढेको हो । यस दिन छापावाला सुन प्रतितोला ८६ हजार ९०० रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको तथ्यांकले देखाउँछ । यसैगरी आज तेजाबी सुन प्रतितोला ८६ हजार ४५० रुपैयाँमा किनबेच हुँदैछ ।
आइतबार यता सुन एकै मूल्यमा कारोबार भइरहेको थियो । सुन लगातार तीन दिन प्रतितोला ८६ हजार ६०० रुपैयाँ कायम रहेको थियो ।
यस्तै निरन्तर दुई दिनसम्म बढोत्तरी भएको चाँदीको भाउ बुधबार भने सामान्य रुपमा गिरावट भएको छ । यस दिन चाँदी तोलामा १० रुपैयाँले ओरालो लागेर प्रतितोला एक हजार २७० रुपैयाँ तोकिएको महासंघले जनाएको छ । मंगलबार चाँदी तोलामा पाँच रुपैयाँले बढेर प्रतितोला एक हजार २८० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
यो पनि हेर्नुहोस्:पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको मूल्य बढ्यो ! नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमले मंगलबार राती १ बजेपछि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलमा २र२ रुपैयाँका दरले मूल्य बढाएको हो ।
मूलय बढेसँगै पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय १८, डिजल र मट्टीतेलको मूल्य एक सय एक रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य पनि प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ बढाइएको छ ।